धनगढी, मंसिर ४ । डोट्याली कवि हेमन्त विवशले पछिल्लो साता धनगढीका साहित्य अनुरागीलाई आफ्ना सृजना सुनाए । उनले कविता, गीत र गजल मार्फत भुइँ मान्छेका कथा–ब्यथा सुनाएका थिए । विस्तृतमा...
म निशब्द छु आमा !
आमा, म सहज अनुमान गर्न सक्छु: तपाईंले नारी भएकै कारण थुप्रैथुप्रै सास्तीको सामना गर्नु भएको छ । तपाईंलाई नारी हुनुका निक्कै पश्चाताप हुन सक्छ । तर मलाई तपाईंकै छोरो हुनमा खुब गर्व छ ।
जापानमा ‘तातेसिना हाइकु संग्रह’को विमोचन
जापान । जापानको टोकियोमा एक भव्य समारोहको बीच ‘तातेसिना हाइकु संग्रह’ को बिमोचन गरिएको छ । जापानमा लोकप्रिय रहेको हानामी पर्व (साकुरा फुल हेर्ने पर्व) को अवसर पारेर अप्रिल १ तारिक आइतवार हाराज्युकु पार्कभित्र गरिएको बिमोचन कार्यक्रममा दर्जनौँ स्रष्टाहरुको उपस्थिति थियो ।
अप्रिल फुलमा यस्तो मजाक नगरियोस्
जब अप्रिल १, अप्रिल फूल (बेवकुफ दिवस) आउँछ अरु केहि सम्झन सक्दिन र यहि घटनाको यादले ज्यादै छटपट गराउँछ ।
आफूले यौवन क्षण बिताएको र अढाई दशकसम्म बसोबास गरेको नेपालको पुर्वाञ्चल क्षेत्रकै प्रसिद्ध तथा सुन्दर नगरी धरानमा घटेको हो । पूर्वीय देशबाट अप्रिल फूल (मुर्ख) बनाउने आएको हैन । पश्चिम देशबाट भित्रिएको हो ।
जेलमा रहेका बालकृष्ण ढुंगेल बने गीतकार
काठमाडौं । राजधानीको डिल्लीबजार खोरमा रहेका बालकृष्ण ढुंगेलको शब्दमा गीति एल्बम आउने भएको छ । गीतकार बन्न लागेका ढुंगेलले लेखेका शब्दमा ‘खाली खुट्टे’ एल्बम आउन लागेको हो ।
संसदमा विवाह प्रस्ताव, तीन महिनापछि बिहे
कथाः कामुक काँइली आमा र नामर्द म !
खै किन हो ? म आजकाल विगतका झिनामसिना सम्झानामै सवै भन्दा बढ्ता समय विताउन थालेको छु । जिन्दगीको एक काल खण्डको समाप्तिपश्चात सायद हरेक पौढहरुको मनमा यस्तैयस्तै वितेका हरेक क्षणको सम्झनाले जरो जाडेको हुन्छ ।